CORONAVIRUS MANERAN-TANY MANANIKA NY 20 000 NY MATY
19 784 ny olona maty, 451 355 ny voa, 112 982 ireo sitrana, raha ny tatitra maneran-tany
voaray omaly tamin’ny 9 ora alina. Olona manodidina ny 3 miliara eto ambonin’ny tany no nanaovana antso avo mba tsy hivoaka ny trano (confinement), ka isan’ny tena ahitana izany ny firenena manodidina ny 70 eo ho eo. Misy ireo fanjakana namoaka didy fa an-tery io, ka isan’izany i Inde, isan’ny be olona indrindra.
683 no maty tao anatin’ny iray andro
683 no maty tao anatin’ny 24 ora monja, ary 7503 ny fitambaran’ny maty hatramin’ny omaly, rah any tatitry ny Protection civile any an-toerana, izay fitomboana 10% eo tao anatin’ny iray andro. Isan’ny nahitana fiakarana be ny taham-pahafatesana tany Lombardie ivon’ny aretina any Italie, izay nisy fitomboana 7%, ka tafiakatra 4474 ny maty. Tafiakatra 74 386 ny tranga efa voamarina, izay ambanin’ny 8% ny fivoarany na izany aza.
Mihoatra ny 70 taona ny 86% n’íreo maty
1331 ny maty tany Frantsa izay saika tany amin’ny hopitaly raha ny antontan’isa farany omaly, ka ny 86% tamin’ireo dia nihoatra 70 taona avokoa. 231 no maty tao anatin’ny 24 ora. Mahatratra 25 233 ny voa, ka ny 11 539 any amin’ny hopitaly, ary ny 2827 amin’ireo dia ao amin’ny sampana fameloman’aina. Ny 1/3 amin’ireo 2827 ireo dia latsaky ny 60 taona, ary ny 59% eo anelanelan’ny 60 hatramin’ny 80 taona, araka ny tatitry ny Tale Jeneralin’ny fahasalamana Jérôme Salomon.
Niala tao an-trano, tra-tehaka niray tao anaty fiara
Tao anatin’ny fanaraha-maso nataon’ny zandarimaria mihitsy ireto mpifankatia ireto no tra-tehaka teo am-panaovana firaisana ara-nofo tao anaty fiara tany Haute-Garone any Toulouse. Tsy nanaja ny fitsipika tsy tokony hivoahana ny trano. Ny 23 martsa teo no nisehoan’ity tranga hafakely ity, saingy omaly, vao tena nivoaka sy niteraka resabe teo amin’ny tontolon’ny fampahalalam-baovao Frantsay. Nampandoavina lamandy 135 Euros moa ireo mpifankatia ireo.
Niteraka adihevitra be ny fahafatesana beantitra roa
Isan’ireo firenena nandray fepetra hentitra hisorohana ny coronavirus ny Filoha Rosianina Vladimir Poutine. Isan’izany ny safidy hoe: na mijanona 15 andro ao an-trano, na mivoaka dia migadra 5 taona any am-ponja. Teo ihany koa ny fametrahana camera de surveillance 100 000 isa. Olona roa efa nahazo taona satria 73 sy 88 taona no maty tao Moscou omaly, izay voalaza fa nisy tsimok’aretin’ny Coronavirus, araka ny fanazavan’ny manam-pahefana ara-pahasalamana, saingy ambara fa mety tsy antony tena voamarina fa nahafaty azy ireo. Voamarina fa tratry ny “pneumonie” sy pathologies concomitants” izay ireo, hoy ny Minisiteran’ny fahasalamana any an-toerana. Amin’izao dia tsy mbola misy maty voamarina fa Coronavirus no nahafaty azy tany Rosia, hoy ny fanjakana.